Izindaba - Ingabe isondo lesihlanu likulungele?
Ingabe isondo lesihlanu likulungele?
Impendulo yalo mbuzo incike ezingeni lakho lokunethezeka, izidingo zomuntu siqu, kanye nesabelomali.Kodwa singabona ngezansi izinzuzo zesondo lesihlanu ngokumelene ne-trailer yokuhamba:
1, Amahithi esondo esihlanu ayasebenza.
Amahithi amasondo esihlanu ayasebenza ngoba akwenza kube lula ukujika, okukuvumela ukuthi ushayele ngendlela evamile ngokunamathiselwe kulandele ngokuzenzakalelayo.Ngakho-ke, i-hitch iqeda ukuqondisa okunzima ozokuthola ngokudonsa kanzima.Lokhu kuyinzuzo enkulu uma ungakhululekile kakhulu ukudonsa.
I-2, amasondo esihlanu anerekhodi elingcono lokuphepha.
Umshini wesondo wesihlanu uqinile futhi uphephile, kungakhathaliseki isivinini sohambo.I-hitch point ephezulu inciphisa i-trailer sway, isimo sokudonsa esiyingozi kakhulu.I-hitch iphinda isabalalise kangcono isisindo se-trailer futhi inikeza iphoyinti lokubambelela elivikeleke kakhulu.Uma uletha izingane noma abanye abagibeli, isondo lesihlanu lingakunika ukuthula kwengqondo okwengeziwe.
3, Amasondo esihlanu asebenzisa igesi encane
Uma kuqhathaniswa nendlu enkulu yemoto Yekilasi A, iloli elidonsa isondo lesihlanu lisebenzisa igesi elincane kakhulu.Ngokusobala, imoto yakho izosebenza kanzima futhi ngenxa yalokho idlule kuphethiloli ngokushesha, kodwa hhayi cishe ngenani elifanayo nelemoto esebenzisa udizili.Kungcono kumvelo kanye nesikhwama sakho semali.
Uma usuvele ungumnikazi wemoto esindayo njengeloli—khona-ke usukulungele ukuhamba.Odinga ukukwenza ukuthenga noma ukuqasha okunamathiselwe okumise okuka-“U” kanye ne-trailer.
4, Amaqembu amakhulu angangena esondweni lesihlanu
Isondo lesihlanu lilungele amaqembu amakhulu.Isikhala esondweni lesihlanu sikhulu impela, sihamba phakathi kwamamitha angama-20 kuya kwangu-40.Lokhu kukuvumela ukuthi ube nabantu abaningi (abafika kwabayi-10) ku-RV-ilungele imindeni esanda kuzalwa nomakadebona ngokufanayo.Okudingayo nje ukunamathiselwe okulungile namandla anele amahhashi ukudonsa i-RV.
I-5, amasondo esihlanu nawo mahle kwabahlala bodwa
Lolu hlobo lwe-trailer luhle ngokulinganayo kubavakashi ababodwa noma abantu bezemidlalo.Amamodeli amancane anesikhala esiningi sokugcina amathuluzi nezinye izinto futhi akunzima kakhulu ukuthi umuntu oyedwa asebenze futhi anakekele.
Mexico Vehicle Market